Inona Ny Fitsarana An-tendrony Ataon’ny Eoropeana Amin’i Japana? Indro Ny Torohevitra Mameno Tena Omen’ny Google Momba Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2016 7:41 GMT
Niverina miaraka amin'ireo “sarintanim-pijerena vilana” mifototra amin'ny vokatry ny fitadiavan'ny mili-pitadiavan-teny mameno tena indray i Nick Kapur. Voamarika indrindra ny namoronany sarintany mampiseho “ireo fijery vilana Eoropeana momba an'i Japana sy ny Japoney, mifototra amin'ny vokatry navoakan'ny mili-pitadiavana mameno tena isaky ny firenena.”
Teo aloha i Kapur, manana fahaizan-tantara manokana an'i Japana mipetraka ao Etazonia, nanao ny sarintanin'ny sainin'ny Japoney amin'ireo firenena Eoropeana [mg], nifototra amin'ny tolokevitra mameno tena navoakan'ny Google japoney.
Indro ny sarintanin'i Kapur vao haingana indrindra amin'ny “eritreritra mety mivilana Eoropeana” amin'i Japana:
Nahavita ny sarintanin'ny fijery mety mivilan'ny Eoropeana amin'i Japana/Japoney, mifototra amin'ny tolokevitra vokatry ny mili-pitadiavan'ny isam-pirenena aho.
Ho fananganana io sarintany io, nilaza i Kapur fa no-anonymizena [nanesorana famantarana anarana] ny karoka any amin'ny fiteny isan-toerana amin'ny fampiasana ny kinovan'i Google mifangitra isan-toerana, tahaka ny yandex.ru ho an'i Rosia.
Eo amin'ny resaka fijery mety mivilana iraisain'ny Eoropeana momba an'i Japana, mifototra amin'ny vokatra mameno tenan'i Google, nanamarika i Kapur:
Lasa lavitra ambony dia ambony amin'ny ankamaroan'ny fiteny ny hoe “manao sarombava amin'ny fandidiana”. Ny faharoa iraisan'ny maro dia hoe “tsy manaratra volon-kelika”.
Tsy ny “sarintanin'i Japana araka ny fijery mety ho diso Eoropeana” sy ny orizinalin'ny “sarintanin'ny fijery mety ho mivilana Japoney an'i Eoropa” ihany no sarintanin'i Kapur mifototra amin'ny tolokevitra mameno tena an'i Google. Manana ny sarintanin'ny araka ny eritreritry ny Japoney amin'i Etazonia ihany koa izy:
Nahavita ny sarintanin'ny eritreritry ny Japoney araka ny tolokevitra mameno tenan'ny Google Japoney amin'ny fijeriny an'i Etazonia isaky ny fanjakana tsirairay (miampy an'i DC) aho.
Namorona sarintany izay mampiseho ny heverin'ny vahoaka japoney momba an'i Amerika Latina sy Karaiba izy (raha raisinao amin'ny lanjany ny valin'ny fitadiavana mameno tenan'i Google):
Nahavita ny sarintanin'ny eritreritry ny Japoney amin'ny fijeriny ireo firenena ao Amerika Latinina sy Karaiba avy amin'ny tolokevitra mameno tenan'ny Google Japoney aho.
Indro ihany koa ny sarintanin'ny tolokevitra mameno tena Japoney ho an'i Afovoany Atsinanana sy Aziatika Afovoany :
Nahavita ny sarintanin'ny eritreritry ny Japoney amin'ny fijeriny ireo firenena ao Afovoany Atsinanana sy Aziatika Afovoany avy amin'ny tolokevitra mameno tenan'ny Google Japoney aho.
Iray amin'ny sarintany farany indrindra nataon'i Kapur ny tolokevitra mameno tenan'ny faritra isankarazany ao Azia:
Nahavita ny sarintanin'ny eritreritry ny Japoney amin'ny fijeriny ireo toerana isan-karazany ao Azia Atsinanana, Atsimo-Atsinanana ary Atsimo avy amin'ny tolokevitra mameno tenan'ny Google Japoney aho.
Manontany ny fomba fiasan'i Kapur ny mpisera Twitter sasantsasany:
@nick_kapur Moa ve tsy voatsinjara ho an'olona iray, mifototra amin'ny faritra misy anao, ny tantaran'ny fitadiavana natao, mpitety, sns matetika ny vokatra mameno tenan'i Google
Namaly i Kapur tamin'ny filazana hoe:
Raha natao mifanaraka amin'ny toerana misy ahy sy ny fitadiavana taloha nataoko ny valiny mameno tenan'ny Anglisiko, dia tsy manao izany kosa ny karoka japoney.
Kapur dia profesoran'ny Tantara Japoney sy Aziatika Atsinanana ao amin'ny Oniversiten'i Rutgers ao Etazonia, ary nianatra sy nampianatra tao amin'ny Oniversiten'i Harvard sy ny Oniversiten'i Stanford.